Mazda nihitsoka familiana 1 maty, 3 naratra
Fandikan-dalàna amin’ny fifamoivoizana Tokony ampiasaina hanefan-tsazy ny Mobile Money
Efa ho isan-kerinandro mba tsy hitenenana hoe isan’andro no handresena fa nisy lozam-pifamoivoizana tatsy na taroa.
Fandaminana fiantsonana anaty ranobe Sahirana ny Easy Park
Manoloana ny rotsak’orana nahatondra-drano an’Iarivo tato ho ato dia nilaza ny avy eo anivon’ny orinasa Easy Park fa miha mafy ny fiatrehan’izy ireo ny asa sahaniny dia ny fitantanana ny fiantsonan’ireo fiara moa izany.
Fitohanana eny Anosizato Hiezaka hanamaivana izany ireo mpanamboatra lalana sy ny polisy
Tena henjana ny fitohanana etsy amin’ny rond point Anosizato nanomboka ny herinandro teo.
Fiantsonan’ny fiarakodia Efa manomboka manara-dalàna ny Malagasy
Nanambara ny tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny fampiasana fiantsonan’ny fiarakodia Easy Park, Tiana Rasamimanantsoa fa nihena be ny fiara voasazy ny taona 2018 oharina ny taona 2017.
Posy na sarety mandona fiaran’olona Ny fifanarahana amin’ny tompon’ny fiara ihany no vahaolana
Tranga iray anisan’ny tena manahirana ny mpitandro ny filaminana misahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra amin’izao ny fisian’ireo posy na sarety mandona fiaran’olon-tsotra eny amin’ny arabe.
Lalana mihotsaka eny Anjanahary Ahiana hitera-doza
Maro ny lalana mihotsaka eto an-drenivohitra ankehitriny noho ny fahalemen’ny tany vokatry ny rotsak’orana. Nahitana izany ny teny Betongolo, Anjanahary II S mialoha ny hidinana an’i Masikara manakaiky trano efa somary antitra.
Taksibe eto an-drenivohitra Misy mampidi-doza kanefa mbola miasa ihany
Misy amin’ireo taksibe miasa eto an-drenivohitra amin’izao efa tsy tokony hiasa intsony.
Tamin'ireo dimy mpandeha, telo naratra mafy, iray maty tsy tra-drano. Io no vokatry ny lozam-pifamoizana tamin'ny talata 5 febroary farany teo, sahabo ho tamin'ny 9 ora alina, araka ny loharanom-baovaon'ny zandarimariam-pirenena eo Andrefan'Ambohijanahary.
Raha iny nizotra hihazo an'i Mahabo, Distrikan’Ankilizato iny ny fiara mpitatitra marika "Mazda", avy any Antsirabe hihazo an'i Morondava no nihitsoka tampoka ny familiana ka niala ny lalana ary namantana tamin'ny vatan-kazo. Rehefa avy nifandona tamin'io vatan-kazo io ilay fiarakodia, teo amin'ny PK 320 +120 an'iny lalam-pirenena faha-35 iny, nivarina tany anaty hantsana, araka ny fampitam-baovaon'ny zandary. Ny Borigadin'ny zandarimariam-pirenena ao Ankilizato no nanatanteraka ny fitsirihina.
Araka ny loharanom-baovao any an-toerana, noho ny tahotra ny dahalo mpanakan-dalana matetika, mirifatra ny mpamily amin’iny faritra iny, indrindra amin’ny alina tahaka ity tranga farany ity. Tsy vitsy ny loza mety mitranga. Ary amin’ny fisian’ny lozam-piarakodia toy izao, manararaotra ireo dahalo mandroba. Tsara vintana anefa ireto tra-doza ireto fa nampandre ny zandary teo akaiky ka tsy tratran’ireo malaso fa tonga ara-potoana ireo mpitandro filaminana. Mampitaraina ireo mpandeha ihany koa ny fahasimban’ny lalana.